Ku laabo cabirka shaashadda iPhone-ka ee 2020 | Wararka IPhone
Ku laabo cabirka shaashadda iPhone-ka sannadka 2020
Oo waxaan sii wadeynaa mudanayaal bingo. Kani waa mid kamid ah weedhahaas oo aan ku celcelin karno marar badan markaan helno warar xan iyo xogo cusub oo ka muuqda shabakada moodooyinka soo socda ee iPhone-ka ee Apple qorsheyneyso inay soo saarto sanadka 2020, maahan sanadkaan.
Xaaladdan oo kale, waxaa la filayaa in IPhone-ka 2019 ee aan arki doonno bisha Sebtember ee soo socota uu ahaan doono mid isku mid ah xagga cabbirka shaashadda, laakiin sannadka soo socda shirkaddu waxay soo jeedin doontaa cabbirka cusub ee shaashadda dhammaan iPhone-kiisa iyada oo la tixraacayo daadinta a qoraal loo diray maalgashadayaasha oo lala wadaagay falanqeeyayaasha caanka ah ee Ming-Chi Kuo.
Saddex nooc oo cusub oo iPhone ah 2020 oo leh laba isbeddel cabbir shaashadeed
Mabda 'ahaan, wax walba waa la qorsheeyay oo moodooyinka cusub ee 2020 waxay ku dhejin doonaan shaashadda OLED sida ku cad xisaabta Kuo ee xantaas. Waxa ku kala duwan kiiskan ayaa ah qaabkaas Hadda 5,8-inch (iPhone XS) hadda wuxuu yeelan doonaa shaashad ka hooseysa 5,4-inji. Xaaladda iPhone XS Max Shaashadda 6,5-inji tani waxay u boodaysaa 6,7 inji ugu dambayntiina qaabka 6,1-inji ah, oo kiiskan noqon lahaa XR, shaashadda ayaa si sax ah isku mid u noqonaysa oo aan is beddeli doonin.
Sida laga soo xigtay Kuo, cusbooneysiintan waxaa suurtagal ah in la ilaaliyo qiimaha qaabka 2020 XR, maadaama aysan yeelan doonin 5G, iyada oo si gaar ah loogu laabanayo moodooyinka waaweyn ee u dhigma kuwa hadda jira ee XS iyo XS Max. Qaabka yaraynaya shaashadda, waxaan dhihi karnaa waxay naguula muuqataa wax lala yaabo in go'aankan la gaaro markii shaashadda 5,8-inch ee hadda jirta ay noo muuqato mid qumman annaga, laakiin go’aankaan si kasta oo ay ahaataba waxaa go’aaminaya shirkadda in yar ka sii badan kala saareysa cabirrada u dhexeeya qaabka XR iyo kan hadda jira ee XS. Waan arki doonaa waxa ku dhacaya dhammaan macluumaadkan ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Ku laabo cabirka shaashadda iPhone-ka sannadka 2020
Apple wuxuu ku hareeraysan yahay dagaalka ganacsiga Mareykanka iyo Shiinaha ee u dhexeeya alaab-qeybiyeyaashiisa
Haddii aad isticmaasho Microsoft To-Do oo aad leedahay Mac, arjiga rasmiga ah ee macOS ayaa hadda la heli karaa